COD: Madaxweynaha Oo Beeniyay Isku Shaandheyn La Hadal Hayay. – SBC
COD: Madaxweynaha Oo Beeniyay Isku Shaandheyn La Hadal Hayay.
Posted by SBC Editor on June 13, 2015 Comments
Madaxweynaha Dowladda Somaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa si adag u beeniyay in isku shaandhayn lagu samaynaayo Golaha Wasiirada ee Xukuumadda Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke.
“Warar dadka ay isla dhex marayaan oo ah in Xukuumadda lakala diraayo ayaa jira, taasi maaha mid sax oo wax walbo wanaaga halaga eeggo.” Ayuu yiri Madaxweynaha Somaliya.
Madaxweynaha, ayaa ku baaqay in la joojiyo wararka xaqiiqda ka baxsan, wuxuuna carabka ku adkeeyay in Xukuumaddu ay shaqayso, ayna sii shaqayn doono, laakiin ay suurta gal tahay xil ka qaadis lagu sameeyo, Wasiirkii xilkiisa gudan waayo, laguna soo bedelo mid kale oo shaqadaasi qaban kara.
“Warxumo tashiilka hala joojiyo Xukuuamdda way jirtaa, wayna jiraysaa, way dhici kartaa. Wasiirkii xilkiisa gudan waayo in xilka laga qaado oo mid xilka ka soo bixi kara lagu bedelo.” Ayuu yiri Madaxweynuhu.
Madaxweynaha oo shir jaraa’id ku qabtay Xafiiskiisa Magaalada Muqdisho, ayaa kaga hadlay arrimo badan, iyadoo uu diiradda ku saaray halka uu maraayo xaalka dalka, ammaanka iyo arrimo kale.
Madaxweynaha wuxuu soo hadalqaaday qorshe ay wado Dowladdiisa oo sida uu sheegay lagu xoojinaayo qiimaha shilin Soomaaliga, oo sida uu qiray uu qiimihiisu noqday mid sii dhacaaya.
“Dowladdu waxay ku dadaaleysaa tayaynta shilinka Soomaaliga oo qiimihiisu dhacaayo, waxaan shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaa in ay nagala shaqeeyaan soo celinta qiimaha shilinka Soomaaliga iyo tayayntiisa” ayuu yiri Madaxweynuhu.
Hadalka Madaxweynaha, ayaa ku soo aadaaya, iyadoo Warbaahinta Somalida qaarkood ay baahisay isku shaandhayn dhawaan lagu samayn doono Golaha Wasiirada. Warkaasi ayaa noqday mid si aan laga fiirsan loo baahiyay.
Hoos ka dhageyso warbixin: